တရုတ်ဖက်ထုပ် - အဓိကအစားအစာ - မင်္ဂလာပါ နာမည်ကြီး
Dumplings သည်ရိုးရာတရုတ်အစားအစာဖြစ်သည်။ ဖက်ထုပ်ရှေးဟောင်းပုဂ္ဂိုလ်များမှအစပြု။ မူရင်းအမည် "နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရွက်" သည်ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံနန်ယန်း0န်ထမ်းများပထမဆုံးတီထွင်ခဲ့သောပထမဆုံးအကြိမ်တီထွင်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း 1800 ကျော်သမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ ၎င်းသည်ရိုးရာအထူးအစားအစာများဖြစ်သောတရုတ်လူမျိုးများကိုချစ်မြတ်နိုးသောရိုးရာအထူးအစားအစာများဖြစ်သည်, "အအေးမိခြင်းနှင့်အအေးမိခြင်း, နှစ်သစ်အတွက်ဖက်ထုပ်ကိုစားပါ" ဟုခေါ်သည့်ရိုးရာသီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိသည်။ "ဖက်ထုပ်ခွေးပေါက်စတစ်စုံနှင့်အတူချက်ပြုတ်နေကြသည်။ ဂျပန်နှင့်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့တွင်စူပါချစ်ခြင်းမေတ္တာဖက်ထားခြင်းဖြင့်သူတို့၏ဖက်ထုပ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒုပ်စတင်ခြင်းကိုယေဘုယျအားဖြင့်ကြော်ငြာများကိုရည်ညွှန်း။ တောင်ကိုရီးယားနှင့်ဂျပန်သို့ပြန့်နှံ့နေသည်။
အမှိုက်ပုံသည်ဟန္ဒဆုံးမင်းဆက်ရှိဟန်နန်အရှေ့ဘက်ရှိဟန်နက္ခပင်များ၌စတင်ခဲ့ပြီးပထမဆုံးဆေးကျောင်းအတွက်ပထမဆုံးဖန်တီးခဲ့သည်။ Tang မင်းဆက်အကြောင်းဒုပ်ဆုပ်ကဲ့မှုသည်ယနေ့ကဲ့သို့နီးပါးနီးပါးဖြစ်လာသည်, ၎င်းကိုပန်းကန်ထဲ၌ကျွေးမွေးသည်။ ဖက်ထုပ်ခြင်းများသည်ရေအေးနှင့်ဂျုံမှုန့်များဖြစ်ပြီးမျက်နှာများနှင့်ရေကိုအတူတကွထားကာကြမ်းတမ်းသောမုန့်စိမ်းကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်မုန့်ညက်သို့မဟုတ်မျက်နှာသုတ်ပုဝါကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်မုန့်ကိုဖုံးအုပ်ထားပါ, အချင်းရှည်ရှည်၏အရှည်ရှည်3စင်တီမီတာခန့်ရှိသောဓားဖြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်လက်ကိုသေးငယ်သည့်အရွယ်အစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးဤသေးငယ်သောဆေးများကိုသေးငယ်သောပါးလွှာသောပါးလွှာသောအသားအရေကိုရိုက်နှက်ခြင်း, ရေအေး, ဒယ်အိုးထဲထည့်ပြီးဒယ်အိုးထဲကိုဒယ်အိုးထဲယူပါသို့မဟုတ်ဖက်ထုပ်မှိတ်သည်အထိချက်ပြုတ်ပါ။ အသားများကိုရေအေးထဲသို့ထည့်ပြီးမီးရှို့နိုင်လျှင်, နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲ) ။ dumplings များကိုပူခေါက်ဆွဲများ, ရေနံ Crisp ခေါက်ဆွဲများသို့မဟုတ်ဆန်ခေါက်ဆွဲများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ core သည်အရသာရှိသောချိုမြိန်။ ငန်သောအရသာရှိနိုင်သည်။ ရင့်ကျက်သောနည်းလမ်းများလည်းရေနွေးငွေ့, ကြော်, , ပင်လယ်သခွားသီး, ငါး, ကြက်, ဝက်သား, ဝက်သား, အမဲသား, အသားအမဲသား, Mutton စသည်ဖြင့်လွင်ပြင်ဖြည့်ခြင်း,
အဆိုပါ dumplings အစာစားခြင်း, dumplings ထုတ်လုပ်ခြင်းသည်ပြီးပြည့်စုံပြီးချက်ပြုတ်ခြင်းနည်းလမ်းသည်အာဟာရဓာတ်နည်းပါးစေပြီးတရုတ်အရောင်အမွှေးအကြိုင်အဟာရ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်အညီဖြစ်သည်။ Dumplings သည်နှစ်ရှည်လများစားသောစားစရာများဖြစ်ပြီးသာမန်လူများကနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကြိုဆိုပါသည်။ ရှေးရှေးများသည် "အရသာရှိသော်လည်း dumplings" ရှိသည်။ နွေ ဦး ပွဲတော်, dumplings သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သင့်သည့်အစားအစာများသည်အစားအစာများဖြစ်လာသည်။ Shanghai Crable Thens Steams, Shandyang ၏ဘေးထွက်ဖက်ထုပ်များ, စီချွမ်၏နာရီဖက်ထုပ်များစသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံတွင်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကျော်ကြားသောနာမည်များစွာရှိသည်။ Dumplings ယခုမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတရုတ်နှစ်သစ်ကူးဖြစ်လာသည်။ Package Dumplings တွင်လူများသည်ရွှေ, အညိုရောင်သကြား, မြေပဲ, Jujube နှင့်သစ်အယ်သီးများကိုမကြာခဏထုပ်ပိုးလေ့ရှိသည်။ ဆန္ဒအလွယ်တကူစားပါ, လာမည့်နှစ်၏နေ့ရက်များသည် ပို. ချိုမြိန်ပြီးမြေပဲများကိုစားကြလိမ့်မည်။
ရုရှား Big Leba ပေါင်မုန့်
ရုရှား၌ကျော်ကြားသောပေါင်မုန့်ရှိသည်။ ၎င်း၏အမည်မှာ Big Leba Bread ဖြစ်သည်။ ဒီလိုမျိုးပေါင်မုန့်ပုံသဏ္mostlyာန်ဟာအများအားဖြင့်ပတ် ...
Sandwich ကအနောက်တိုင်းနိုင်ငံများရှိကျယ်ပြန့်လူကြိုက်များစားရန်လွယ်ကူသောနံ့သာအမျိုးမျိုး, ကနေဖန်ဆင်းတော်သားနဲ့ဒိန်ခဲအနည် ...